Gini mere ichota uzo ozo ji adi nma ugbua?
Curved ikanam ngosipụta dị iche iche site na omenala square ada ụgbọelu, ha nwere ike zuru okè ona na nwụnye gburugburu ebe obibi na ọbụna kpamkpam ngwakọta n'ime nwụnye ndabere. Ha nwere ike ịmepụta ka ha nwee radius dị iche iche dị iche iche dị iche iche, dakọtara n'ụzọ zuru oke. Ha na-adịkarị mma karịa ngosipụta ndị nkịtị na-ebute n'ihi ihu ọma mara mma dị larịị. Ha na-agbanwe agbanwe ma nwee ihu ọhụụ. N'ihi ihuenyo a na-enyo enyo na nke nwere ume ọhụrụ, ojiji nke ngwaọrụ ndị na-enwu ọkụ na-enwu, gbatịkwuru ndụ ọrụ, ọnụahịa a na-ebelatakwa nke ukwuu.
Enwere ike ịkekọrịta ngosipụta ọkụ ọkụ n'ime ọtụtụ ụdị, dị ka concave cambered elu ngosipụta na ngosipụta ihu igwe convex, ngosipụta gburugburu cambered na ngosipụta ihu igwe oval. A na-eji ụdị ahụ eme ihe n'ọtụtụ ebe dị ka ihe ngosi nke nkwukọrịta maka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, ndị ọkachamara n'ịkwalite, ndị na-ere ahịa, ndị ngosi, ndị isi ụlọ ọrụ ọha na eze na ndị ọkachamara ọzụzụ. Maka nkwalite akara, nkwalite ọrụ ngwaahịa na nkwukọrịta nke ozi azụmaahịa arụgoro ezigbo ọrụ n'ịkwalite.
Ofzọ ịmepụta na ịmegharị ihe ngosi na-egosi dị iche dị iche iche. Igwe redio dị mkpa mgbe anyị bịara ikpebi otu esi ahapụta usoro mmepụta.
1.Mgbe okirikiri ahụ dị ogologo karịa otu mita, anyị nwere ike ịme ụlọ ọrụ ahụ ka ọ bụrụ nke nwere ọdịdị dị ogologo na nke kwụ ọtọ, mgbe anyị na-ezukọta ha, anyị kwesịrị ịhazigharị akụkụ n'etiti oche abụọ ọ bụla dị nso site na ịhazi nkuku na-achịkwa valvụ.
2.Ọ bụrụ na radian dị mkpụmkpụ, a chọrọ ka kabinet ahụ megharịa, anyị ga-akpachara anya mgbe anyị na-ezukọta.
3.Ọ bụrụ na radian dị mkpụmkpụ karịa mita 0.5, anyị kwesịrị ịmepụta modulu pụrụ iche, modulu ndị a kwesịrị ịbụ Vertical strips. e wezụga, anyị kwesịrị ime ka nchara Ọdịdị na-usoro.